Karazana tariby mahazatra amin'ny Connector Board ho an'ny elektronika mandeha ho azy
IATF16949 taratasy fanamarinana ho an'ny vokatra Automotive
Izahay dia manome mpamatsy Wafer / Wire ho an'ny mpampitohy amin'ny Board miaraka amina karazana pitch sy haino aman-jery samihafa ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao.
Fametahana ny mpampitohy Phosphor Bronze, Tin / Gold Amin'ny rambon'ny solder
TOSIKARATRA miasa 200V AC
Fanoherana insulation Ω 100MΩ
Avy amin'ny famolavolana ny vokatra, –tooling– tsindrona - fametahana - fametahana - fivoriambe - fanaraha-maso fanaraha-maso QC - fandefasana, vita ny dingana rehetra tao amin'ny ozininay afa-tsy ny fametahana azy. Ka afaka mifehy tsara ny kalitaon'ny entana isika. Azontsika atao koa ny manamboatra vokatra manokana ho an'ny mpanjifa.
Teo aloha: 1.0mm milahatra avo roa heny Wire to Board Connector
Manaraka: WAFER 3.0mm XPIN DIP 90 ° miaraka amin'ny paositra
Connector Mini-Lock Wire-To-Board
2.0mm mpampitohy lohan-doha
1.0mm milahatra avo roa heny Wire to Board Connector
BTB080060-M1D19200 0.80mm Board fifandraisana roa ...
FPC03045-42201 FP C0.3mm XP SMT H = 1.0mm Open T ...
Alternative Micro fit 3.0mm pitch tariby hiditra ...